CJSOI – Fihaonan’ny tanora : nasongadina ny firahalahiana | NewsMada
CJSOI – Fihaonan’ny tanora : nasongadina ny firahalahiana
Nanomboka ny alahady ka nitohy omaly ny fihaonan’ny tanora, tafiditra indrindra anatin’ny lalaon’ny CJSOI, izay tontosaina eto amintsika amin’izao fotoana izao. Samy niezaka naneho ny lohahevitra manodidina ny firahalahiana ireo tanora nandray anjara tetsy amin’ny Cemdlac Analakely, omaly.
Nisy ny fampirantiana narahina adihevitra sy fampahafantarana, nataon’ny isam-bondrona. Samy naneho ny mampiavaka ny firenena niaviany tsirairay avy, kanefa koa samy nampisongadina ny mampitovy ny mpandray anjara. Ohatra noraisina tamin’izany ny endri-pihavanana sy firaisankina, izay misy any Seychelles, La Réunion sy eto Madagasikara, ohatra.
Tsy sakana fa vao mainka harena ny fahasamihafana misy, ary antony iray nampidirana ny lafiny kolontsaina ao anatin’ny lalaon’ny CJSOI izany. Mikasika izay indrindra, fantatra fa hotontosaina anio tolakandro ny teatra, handraisan’ireo firenena mpandray anjara, etsy amin’ny Cemdlac Analakely ihany.